Faahfaahin Weeraradii Hotelka Saxafi. – Shabakadda Amiirnuur
Faahfaahin Weeraradii Hotelka Saxafi.
November 10, 2018 9:05 am by admin Views: 122
Weerarka ayaa ku bilowday camaliyaat Istish-haadi ah ka dibna waxaa xigay weerar toos ah oo ciidamada Al-Shabaab ay ku qaadeen Hotelka, waxaana in muddo ah uu dagaal xoogan ka socday gudaha Hotelka.
War rasmi ah oo ay ka soo baxay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo ay baahisay Idaacadda Islaamiga Andalus ayaa lagu sheegay in weerarka lagu dilay ugu yaraan 24 ruux oo ay ku jiraan Saraakiil iyo mas’uuliyiin ka tirsan DFS, islamarkaana lagu dhaawacay tiro intaas ka badan.
Waxaa suuragal ah in khasaaraha uu intaas ka sii bato, waxaana jira askar iyo saraakiil dhaawacyo ah oo xaaladooda laga deyrinayo.
Mid ka mid ah Camaliyaad Istish-haadiga ee lagu weeraray Hotelka ayaa ka dhacday Albaabka dambe, waxaana lala eegtay dad isku dayey in ay ka baxaan ilinka dambe ee Hotelka si ay uga bad-badaan xabadda kulul ee ka socotay gudaha Hotelka.
Dadka ku dhintay weerarka waxaa ka mid ah agaasimihii Hotelka C/fataax Cabdi Rashiid, waxaana sidoo kale si halis ah ugu dhaawacmay agaasimihi hore ee wazaarada warfaafinta, Cabdi Risaaq Bahalawi iyo taliyaha Police-ka degmada Hodan.
Waxaa sidoo kale jira saraakiil ka tirsan hay’adaha amniga iyo kuwa Police-ka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarka kuwaas oo weli aysan inoo suuragalin inaan helno magacyadooda oo dhameystiran.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sanadkii 2015-kii weerar Inqimaasi ah oo midkan la mid ah ku qaaday Hotelka Saxafi, iyagoona xilligaas ku dilay Abaanduulihii ciidanka DF, Cabdi Kariin Dhaga badan, Xildhibaano ka tirsanaa Baarlamaanka iyo milkiilihii Hotelkaas oo lagu magacaabi jiray Cabdi Rashiid Ilqeyte.